Wararkii ugu dambeeyay Shirka ka socda Dhuusamareeb | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay Shirka ka socda Dhuusamareeb
Wararkii ugu dambeeyay Shirka ka socda Dhuusamareeb
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya, in Shirkii u dhaxeeyay madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada uu dib u furmay, iyadoo dhammaan ka qeybgalayaashu ay goob joogyihiin, sida ay Halqaran News u xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah.
Madaxweynaha dolwad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa lagu guuleystay in uu maanta shirka ka soo qeyb galo, kadib markii uu xalay ka baaqday markii la isku fahmi waayay shalay xaaladda gobolka Gedo.
Wararka ayaa sheegaya, in shirka uu socda, welina aan wax is afgarad ah laga gaarin dooda gobolka Gedo, balse meel fiican ay wax marayaan.
Sidoo kale, Wararka ayaa intaasi ku daraya, in ay jirto cadaadis dhincyada uga imaanaya beesha caalamka taas oo dhinacyada lagu khasbayo in aanay shirka ka tagin ilaa heshiis la gaaro.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa wali ku adkeysanaya in maamulka gobolka Gedo gacanta loo soo galiyo ka hor doorashada.